ChiGeorgian Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(946 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ...Georgia ndiyo imwe yenyika shoma muSouth Caucasus, uko kubhejera kuri pamutemo zviri pamutemo. Indasitiri yekubhejera munyika yakadzokera kumazuva eNEP, apo kasino yekutanga yakavhurwa muTbilisi. Nekudaro, ivo vakave vakareba (makore matatu) uye zvishoma nezvishoma vakachinja zviitiko zvavo muna Chivabvu 1928, apo zviitiko zvese zvekubhejera munzvimbo yeSoviet Union zvakarambidzwa.
Panguva iyoyo, ese ari maviri akavakidzana neTurkey, Russia neAzerbaijan, bhizimusi rekubhejera riri mumamiriro akaomesesa, macasino eGeorgia akavhurika kune vese vanouya. Zvakadaro, nyaya yekubhejera uye kunyanya matambudziko ane chekuita nekubhejera, iri kuramba ichikwira. Nyika yaigara ichitaura pakati pevamiriri vezvematongerwo enyika uye vagariwo zvavo nezverutivi rwakaipa rwekubhejera.
Rwinyorwa rweZvinyorwa zvepamusoro 10 Georgian Online Casino Sites
Mafungiro eruzhinji nezve kubhejera zvakanaka, vanhu vazhinji vanosarudza kubhejera seimwe yezvavanofarira zviitiko. Yazvino nyaya yekuongorora inosimbisa kuti huwandu hwevanhu vekuGeorgia zvine hukama nekubhejera. MaGeorgian anonzwisisa kuti makasino anokwezva mari inodiwa kwazvo yekunze, uye nevatambi vatambi.
Paramende yeGeorgia parizvino iri kuongorora mutemo wekunyorwa wakanangana nekudzora zvakaipa zvinoitika pakubhejera. Icho chirevo chinonyanya kutaura nezve kurambidzwa kwekubata kasino uye mamwe ekubhejera masisitimu evagari vemo, uchifunga muhoro. Izvo zvinotsigirwa kubvumidza kubhejera chete kune avo vagari vane muhoro unosvika kanosvika 500 GEL, uye avo vasina pasi pe5000 GEL kumaakaundi avo emabhangi. Chirongwa ichi chichiri kuongororwa.
Kubhejera pamhepo kuGeorgia zviri pamutemo. Chinhu chakasarudzika cheichi chikamu munyika inyaya yekuti angangoita macasino epasi rese-ane yavo epamhepo kasino masosi. Indaneti inobhejera indasitiri yeGeorgia inoshanda vanoverengeka vemuno nevekunze vashandisi, nekuti mamiriro ekuwana rezinesi zvinoenderana nemutemo wekubhejera online kuGeorgia ari nyore. Tamba mutambo wekubhejera online kuGeorgia anogona kuve akakosha ekudyidzana makirabhu anomiririra makamuri nemakomputa akabatana neInternet uye akaiswa stvu munharaunda uye kune dzimwe nyika pamakero epasino.
VaGeorgia vanofarira kutamba pamakasino epamhepo mumakirabhu akadaro, asi ikozvino vanhu vazhinji varikushandisa mudziyo wavo wepamba - makomputa, nharembozha zvichingodaro.
Munguva pfupi yapfuura, Paramente yeGeorgia yaifunga kuti danho rekudzivisa kushambadzira kwekubhejera munyika. Muchiitiko apo chinangwa chichagamuchira simba remurairo, uye zvigadziriswa zvinoitawo zvekubhejera muIndaneti. Uyewo, chirevo chinopa hutano hwakanyanya pamusoro pekubata kubhejera kwevanhu vari pasi pezera remwana muduku, uye mari yakakwirira yezvakaipa chero zvipi zvisiri izvo kune vashandi.
Georgia Online - Kubhejera kuGeorgia
Georgia - inyika ine zuva ine hunhu hwakanaka uye yakanakisa mamiriro ezororo nekushanya. Yenharaunda ngano uye gourmet chikafu, pamwe nekugamuchira vaeni kwevanhu vakwezva nyika ino nevanhu vanobva kumativi ese epasi. Mamiriro ekubhejera muvhu-based fomati, uye iyo online inobvumidza zvakakwana kuti unakirwe nemutambo. Asi isu tichataura nezvayo gare gare. Saka, CasinoToplists yakatumirwa kuTbilisi!
Nzvimbo-based casinos mumitambo muGeorgia ine kuvapo paInternet;
Iko kune vose vaGeorgia uye vanobvumirana nenyika;
Icho chiri kutarisa bhiri rekusimudzira kufambisa kune zvinyorwa zvevashanduri vemarudzi ose emadhora ekutamba;
Ungatamba sei online kasino? Nhanho-nhanho kuraira;
Nzvimbo yeGeorgia uye nhepfenyuro yenguva yakaitika;
Chokwadi chinofadza pamusoro peGeorgia neGeorgia;
Kubhejera pamhepo muGeorgia - nhoroondo yezvakaitika
Tisati tatsanangura mamiriro ezvinhu aripo ekubhejera munyika muno, tinopa muchidimbu nhoroondo yekubhejera muGeorgia.
1801 - 1922 Georgia chikamu chehushe hweRussia uye inotevera zvarinoda zvine chekuita nekubhejera. Muna 1918, nguva pfupi yerusununguko, uye muna 1922, pamwechete neArmenia neAzerbaijan vakava chikamu cheTranscaucasian Soviet Federative Socialist Republic. Muna 1920 muTiflis ine makasino maviri uye yakavhura yayo fekitori kugadzirwa kwemakadhi ekutamba. Chinyorwa 2 cheCriminal Code yeGSPC inopesana nesangano remabasa ekubhejera zvisiri pamutemo - kusungwa kusvika pamakore matatu, uye kutorerwa pfuma.
1959 Tbilisi inopa racetrack kubheja nayo. Mabhizinesi mazhinji ekubhejera asiri pamutemo.
1990 Kubhejera bhizinesi rinogamuchirwa zviri pamutemo. Iyo yekutanga kasino «Ori Juja» muTbilisi.
1991 Georgia inowana rusununguko. Sosbstvennoe mafungiro ekubhejera.
1992 Mutungamiri Zviad Gamsakhurdia akapa mutemo wekutanga "Pakuvandudza mitemo yemalotari uye kumwe kubhejera muRepublic of Georgia." Kuburitswa kwemalayisensi ecasino.
1997 Nhamba yemitero.
2000 Mutungamiri Eduard Shevardnadze vakaunza bhiri rekurambidza kubhejera. Chirongwa chakarambwa. Panguva ino muGeorgia inoshanda anopfuura makasinos makumi maviri, 20 acho ari muTbilisi.
2002 Mutemo 1426-Zuva "Pachishandiswa kupihwa marezinesi uye mvumo dzebhizinesi." Mamiriro matsva ekuburitswa kwemalayisensi nemvumo.
2003 Eduard Shevardnadze, akaedzazve kurambidza bhizimusi rekubhejera, asi rakabudirira neMutungamiri Mikheil Saakashvili muna 2004. Nyika inodzora rotari.
2005 Mutemo № 1180 "Pamusangano wemalotari, kubhejera uye mimwe mitambo inobatsira." Inoshanda nanhasi, iine zvakawanda zvakagadziriswa.
2014 Nyika ine mabhizinesi makumi mapfumbamwe nemana ekubhejera. Makasino mazhinji akavhurika uye zvitoro zvekubheja muTbilisi, Batumi neKutaisi vanomutevera. Kunze kwevagari vemuGeorgia pakati pevatungamiriri vagari veRussia, Turkey, Armenia neUnited Kingdom.
2000 - 2017 Kubhejera pamhepo. Anenge ese nyika-akavakirwa macasino, ane marezinesi epamutemo, achivhura mawebhusaiti avo nemitambo yepamhepo. Mitambo yepasi rese yevanoshanda inowanikwa pachena.
(Ruzivo rwunotorwa kubva mumabhuku Eugene Kovtun "Kufara munyika yeSoviet")
Ndezvipi zvinotungamirirwa nebhizimusi mubhizimusi?
Zvingangodaro, munguva refu muGeorgia ichagadziriswa mutemo wekubhejera online kune vashandisi vekunze. Ivo ndivo vasina kusimba kubatana mune nyaya yekudzora kubhejera nehurumende. Nyika uye epamhepo makasino anozosungirwa kunyatso tarisa vatambi vavo vezera rehuwandu, pamwe nekuvandudza hurongwa hwekurwisa mitambo yemitambo zavisimostyu- Vabhejeri.
Iko kune yeGeorgia nyika-yakavakirwa kasino? Tarisa icho zvakare mune online fomati. Sangano remakasino epamhepo pasina anokwana epasiroko analogue ine rezinesi rinoshanda munharaunda yeGeorgia inorambidzwa. Ndokunge, kana iwe ukatamba mune yeGeorgia inoshanda kuGeorgia haina kasino yezita rimwe chete - hazvisi pamutemo;
Iwe unogona kutamba mune chero epasi rese online kasino, iyo ine yayo yega rezinesi. Izvo hazvipesane nemitemo. Vashandi vepasi rese havana kuvharirwa, sezvazvinoitika, semuenzaniso, muRussian Federation.
Chaizvoizvo, iwe unogona kutamba mukasino pasina cheisheni, asi iwe unozviitira iwe pachako pangozi.
Mhedziso: Mutambi weIndaneti anokwanisa kusarudza pakati penzvimbo-based casinos Georgia inomiririrwa mumutambo weInternet uye kune dzimwe nyika.
Ungatanga sei kutamba casino online muGeorgia?
Sarudza kambani yepaIndaneti . Maitiro ekuzvidzivirira iwe kana uchisarudza anoshanda epasi rese? Tora mukana weedu runyorwa rweyakavimbika makasino. Inowanikwa mukoramu yekurudyi.
Kudzidza mamiriro . Wongorora ruzivo rwese pawebhusaiti yepamhepo kasino (marezinesi mamiriro ekuisa dhipoziti uye kubvisa nzira, mabhonasi uye kubheja kana paine mhinduro kubva kucasino (online chat, kero, nhamba dzenhare).
Read player player nezve ino online sosi mune network. Rangarira, kwete ese ongororo ari echokwadi, uye anogona kuve akagadzirwa.
Mari Inotaurirana . Ndeapi macasino anopa sarudzo dzekuwedzera kana kubvisa mari? (NaWebMoney, makadhi echikwereti uye makadhi ekubhengi kuburikidza neVisa, Yandex, nezvimwe. Ndeapi mazwi ekutora mari? Chii chakakunakira?
Mhando yemitambo . Ndeapi akasiyana emitambo anopiwa, iyi kasino? Pane here chimwe chinhu chinokodzera iwe uye chaunoda?
Mitambo yakasununguka . Kana iwo mukana wekutamba mune yekutanga bvunzo modhi, edza kuzviita. Ingori pane "machira". Saka zvichave zvakajeka kana iwe ukatamba uye kana ichienderana senge. Uye zvakare, mune mimwe mitambo, senge baccarat kana keno haina kunyanya kuverenga mirau pamberi. Tinokukoka iwe kuti udzidze nezve zvingangoita zvakasiyana uye nemutambo mutambo uyo unogona kukubatsira iwe zviri nani kudzora uye kushandisa yako bankroll.
Enda kuGeorgia uye pfupi muchiitiko chenhoroondo
Georgia iri muEastern East, ine nzira yekubuda kuGungwa Dema. Dzedyo vavakidzani nyika iRussia, Armenia, Turkey, Azerbaijan.
Iyo yazvino nharaunda yaive nevanhu vakawanda kunyangwe pano yechipiri mireniyamu BC Iyo Golden Age yeGeorgia yakaitika mukutonga kwaMambokadzi Tamara muXII-XIII mazana emakore. Kusvikira hurumende yadzokororazve nguva iripo, inopinda muhondo, mauto nemubatanidzwa wezvematongerwo enyika. Zvirongwa zvavo zvazvino zvakawanikwa muna 1918. Ikoko kwakatevera makore muUSSR.
Muna 1991, mushure mekuparara kweSoviet Union, Georgia yakazvimiririra zvakare, uye muna 1992 yakabatana neUnited Nations. Nhasi, nyika iri musha kune vangangoita mamirioni e4.5 vanhu. Ndiye mutungamiri Giorgi Margvelashvili uye Mutungamiriri - Irakli Garibashvili.
Georgia pamepu yeAsia
Nzvimbo Itsvene yeUtatu Cathedral yeTbilisi . Iri izita reChitsvene Utatu Cathedral muTbilisi. Nzvimbo: Georgia, Tbilisi, Elia Hill. Chechi yevechidiki yeOrthodox, yakagadzirirwa naArchil Mindiashvili - chimwe chezvivakwa zvakanakisa zveTbilisi.
Nerikala . Kero: Mount Mtatsminda muTbilisi. Zvimedu zvekare kwazvo zvedzimba dzakaomarara ndezana ramakore rechina.
Turtle Lake . Nzvimbo: iyo yekuchamhembe materu eGomo Mtatsminda, 3 km kubva kuTbilisi. Nzvimbo inozivikanwa yezororo, inova mota yemagetsi.
Anchiskhati . Kero: st. Shavteli, 9, Tbilisi. Chechi yekare yeGeorgian Orthodox munyika, inotangira muzana ramakore VI. Maererano nengano, yakavakwa kunyangwe namambo weIberia Villas Udzharmeli.
Keshvati . Adress: Shota Rustaveli, Tbilisi .. Chechi yeOrthodox yeSt. George kutanga kwezana ramakumi maviri.
Chokwadi chinofadza pamusoro peGeorgia neGeorgia
Georgia - zita renyika, iro rakabva mumutauro wechiArabic. Kuzvidaidza zita ndiSakartvelo.
Iberia - raive zita renharaunda yeGeorgia muzana remakore rechitatu BC. e. Nhasi izita reSpain, uye iyi haisi tsaona. Madzitateguru evaSpanish akauya aibva kuGeorgia. Yakasarudzika kuEurope, mutauro weBasque wakafanana neGeorgian.
Mutauro wechiRussia hauna mukurumbira munyika, unonzwisiswa kunyanya vanhu vakuru. Kune vechidiki vasiri veRussia vanobata zvirinani pachirungu.
Pamasara evanhu vane makore 1. 770 makore ane chiuru, Georgia yakawanikwa, pamwe neshinda yekare, iyo 34 chikuru. Makore.
Mutemo wekubhejera muGeorgia unobatanidzwa mumari yekushandira - muviri wakasarudzika uri pasi pe Ministry of Finance. Chinangwa chayo kugadzira nharaunda inokodzera bhizinesi, pamwe nekuumbwa kwemutero wakapusa uye wakajeka pakubhejera.
Kubhejera mutemo weGeorgia kunobva pamitemo miviri mikuru:
kuve nekururamisira uye kusununguka kwemabhizimisi;
kudzivirirwa kwevana uye vanhu vanotambura kubva mukukuvadzwa, izvo zvinogona kukonzera kubhejera.
Kuronga kubhejera muGeorgia, muzvinabhizimusi anogona kusarudza imwe kana dzakawanda nzvimbo dzebasa dzinosanganisira kasino, michina yekugezesa, mitambo yetafura, kubheja zvemitambo, bhingo, lotto uye marotari. Kuburitsa mvumo, pamwe nemutemo uye kutonga kwevanoronga zvekubhejera zvinotakura Revenue Service (United Mutero uye Tsika Yedare)
Nomutemo, mvumo dzose dzekuvhura kubhejera muGeorgia dzinogona kuwanikwa mune zvemagetsi fomu, hapana chikonzero chekuenda kune mutero manejimendi. Gwaro iri rinoshanda kwemakore mashanu kumahoro emuchina wecasino, mahofisi ekubheja kana mafemu ane bhingo kana bhingo, uye gore rimwe mune marotari. Makambani akagamuchira mvumo yekasino kana maslots, anogona kukumbira gwaro iri roga kumitambo yedesktop. Ichashanda kusvika nguva yasvika chisarudzo chikuru.
Casino muGeorgia: Mitero
Mutemo unopa chegore negore nekota mitero yemhando dzakasiyana dzekubhejera. Mari yegore negore yemvumo - iyo yakatarwa mari inobhadharwa muzvikamu zvakaenzana nguva dzose. Quarterly yaibhadhariswa kana pagore pachinhu chimwe nechimwe chinoshandiswa pakubhejera. Huwandu hwavo hunosiyana zvichienderana nemunda wekubhejera uye nedunhu iko iko iko institution.
Mitero inosiyana kwazvo. Mazhinji eaya anokanganiswa nenzvimbo yenzvimbo, semuenzaniso, mitero muTbilisi, zvakanyanya kupfuura kune dzimwe nzvimbo, asi kufarira kubhejera kwakakwira. Mvumo yekuvhura kasino kuno kuGeorgia inofanirwa kubhadhara GEL mamirioni mashanu pagore pane slots -. GEL 5 mamirioni Muridzi wekasino yemuno kuvhura matatu emitambo yekirabhu bhodhi pasina chero mutero wegore mudunhu, semakina emuchina - iyo imwechete kirabhu.
Mamwe makasino eGeorgia akasunungurwa zvizere kubva pakubhadhara kwegore. MuBatumi, Kobuletti, Khelvachauri, Anaklia neGanmukhuri havakwanise kubhadhara mutero, kuvaka kubva pamakamuri emahotera makumi masere kusvika zana padyo. Munharaunda yeGudauri, Kazbegi, Bakuriani, Tskaltubo uye Sighnaghi kasino yakasunungurwa kubva pairi. Mumufananidzo iwo ruvara rwebhuruu unoratidza iwo masisitimu anogamuchira mabhenefiti emakamuri 80+ akavakwa, tsvuku - makumi masere makamuri, girini - mune ese mamiriro
Internal Revenue Service ichabhadhara zvimwe zvikwereti kune kubhejera:
mutero pamari yemunhu (mibairo) - 20%;
mutero wepfuma - kusvika 1%;
Mutero wemubhadharo wemubatanidzwa - 15%;
mutero webasa, wakaitwa panguva yemakwikwi - 20%.
Makirabhu desktop yemitambo, slot muchina dzimba uye zvemitambo mabhuku akaburitswa kubva kune inosungirwa kuisa mari marejista emari yekuverenga. Vanofanira kuzvishandisa chete kana iwe ukavapa mamwe masevhisi, sekutengesa zvinwiwa kana chikafu.
kubvumidza nguva yebhizinesi rekutamba muGeorgia - mazuva makumi maviri. Unogona kuiwana mahara. Kana iyo gwaro ichidikanwa nekukurumidza, zvinokwanisika kubhadhara GEL 20 ($ 400) - ichave yakagadzirira mukati memazuva gumi, GEL 160 (10 $) - mazuva mashanu kana GEL zviuru zviviri ($ 800.) - kwezuva rimwe chete.
Mvumo dzakaparadzaniswa dzesangano remakasino epamhepo hadzina kupihwa, sezvinoita mapurojekiti akadaro anogona kungova varidzi vemasangano chaiwo ane rezinesi. Vane kodzero yekutarisira saiti necasino, slots, mitambo yekubheja uye kudhirowa rotari. Vanokwikwidza vekunze ivo ivo havatyisidzi - kumakambani ekumahombekombe nemutemo zvinorambidzwa kubhejera kuGeorgia, saka musika unovimbisa wakasununguka zvachose kune vanamuzvinabhizimusi vemuno.
Zvinoenderana nemhedzisiro yekushanda kwenzvimbo dzakadai kubhadhara mari yekota. Saizi yavo inoonekwa nehutongi hwenzvimbo. Inosiyana pakati pe 30-60 zviuru GEL. ($ 12-24 zviuru.). Uye zvakare, yakawedzera mimwe mitero yakanyorwa pamusoro.
Panguva ino muTbilisi yakaburitsa 3 mvumo Batumi - 11 (ina yemasangano ayo achangobva kuvaka imba yehotera) muTshaltubo - 5 neKazbegi - 1. Nekudaro, iyo slot muchina kamuri 72 inoshanda zvakajeka pamitambo yekutamba Georgia 107 zvitoro zvekubheja, makambani ane 3 bhingo kana lotto, 41 uye 3 lottery kubhejera kirabhu.
Kune ruzivo rwese rwakapihwa mupepeti Nhau dzeKubhejera ndinotenda Theon Shiukashvili - iyo Senior Service yeGeorgia mari. Akaita pamitambo yeGeorgia Congress semutauri, ane makore gumi echiitiko mumasimba emitero yenyika uye ane basa rekupa mvumo musangano rekubhejera kuGeorgia.
Kuwana rusununguko, Georgia yakazvipira mukusimudzira indasitiri yemitambo. Nzvimbo inofadza yenzvimbo, kusavapo kwemutemo kurambidzwa kubhejera, pamwe nekuvimbika kune indasitiri yemitambo neruzhinji rwemauto ezvematongerwo enyika, huori hwepasi, hunyoro hwekuita bhizinesi, mamiriro akasununguka emitero anopa kubhejera Georgia huwandu zvakanakira.
Iyi yazvino mutemo weGeorgia inogonesa zviri pamutemo mhando dzese dzekubhejera zviitiko. Pakati pemhando huru - kasino, bhizimusi rekubhuka (kusanganisira kubheja), rotari, machini emuchina, makirabhu ekubhejera. Muchikamu chepamhepo, mutemo unobvumidza kurongeka kwekasino, kubheja uye slot muchina parlors.
Zvirongwa zvekusangana kwekubhejera muGeorgia ndechokuti mitambo yezvigadzirwa-mitambo yemagetsi inofanirwa kuva nepo chaiye ye (pasi) kubhejera nzvimbo.
Bhizimisi rebhizimisi muGeorgia rinodzorwa nemitemo iyi yemutemo:
Mutemo weGeorgia "Pamusoro pesangano remalotari, kubhejera nemitambo inobatsira" kubva pa25.03.2005 -1180;
Mutemo weGeorgia pane "Rezinesi uye Mvumo" yakanyorwa 24.06.2005 -1775;
Georgia Mutemo "Pamari yekupa marezinesi uye marezinesi" kubva 12.08.2003 №2937;
Mutemo weGeorgia "Pakuunganidzwa kwekubhejera" kubva pa29.12.2006 №4250;
Mutero Wemitero weGeorgia kubva ku17.09.2010 №3591;
Joint Order yeGurukota rezveMari uye Gurukota rezveMukati meGeorgia "Pakubvumidzwa kwemitemo yevaridzi vezviitwa zvekuyedza mvumo yekubhejera uye mimwe mitambo inobatsira" kubva 14.12.2011 №611-1013;
Kurongeka kweMusoro weFineral Monitoring Service yeGeorgia "Pakubvumidzwa kweMutemo" Pane maitiro nemamiriro ekuti uwane iyo ruzivo, maratidziro ayo, iyo yeGeorgian Financial Monitoring Service kugadzirisa uye kutapurirana nevari kuronga marotari, kubhejera uye mimwe mitambo inobatsira. "Uye" Pamutemo uye mamiriro ekuwana ruzivo, maitiro aro, iyo yekuongorora zvemari Service yeGeorgia kugadzirisa uye kutapurirana nekasino "kubva 28.07.2004 №94.
Mamiriro ezvinhu ekuwana mvumo
MuGeorgia, maitiro akavimbika kwazvo uye zvinoda kuwana chibvumirano (reisheni) chesangano uye mufambiro wekubhejera.
Gamuchira mvumo inogona kunyoresa makambani muGeorgia, uye vadzidzisi vemakambani aya vanogona kunge vari vagari veGeorgia nevatorwa zvakafanana.
Kuburitswa kwemvumo yekubhejera kunotakura Revenue Service yeGeorgia. Anopihwa anofanirwa kuendesa magwaro anodiwa mufomu yakaverengwa nerubatsiro rweiyo IRS peji rewebhu.
Kugashira kwekugamuchira kunosarudza nguva yekuburitsa gwaro zvichienderana nemutemo wakatemwa wekuchaja kwezuva rimwe rebasa - GEL zviuru zviviri / $ 1, mazuva mashanu - GEL 2 / $ 830, mazuva gumi - GEL 5 / $ 800, vashandi makumi maviri. mazuva - mahara.
Nhamba yezvinyorwa zvinotarisirwa kuwana mvumo, yakakwana zvakakwana uye inobva kune imwe nzira yekubhejera.
Mubvumirano wemvumo yekugadzirisa kutengesa, maoteti, kupikisa bhatikiti inotumira kuGeorgia Revenue Service:
tsvina kubva kuRejista yeHurumende;
rugwaro runosimbisa mvumo yekubhadhara mvumo;
chibvumirano pakati pemupi uye munhu kana chikwata chinobhadhara matikiti ekubhadhara mari (kunze kwemitambo, yakarongeka mu-system-electronic form), zvichiratidza nhamba yematekiti akaitwa;
mamiriro (mitemo) yemasangano masangano anobatsira;
mimwe mitambo yemitengo inobatsira (kunze kwemitambo, yakarongeka mune imwe nzira-yekombiyuta fomu);
mune iyo mamiriro ekubhejera - gwaro rinotsigira kupihwa kwemubairo homwe haisi pasi pezviuru gumi GEL / $ 10, 4 zviuru.;.
mune iyo mamiriro ehurongwa hwe totizator mu systemic-yemagetsi fomu (mutambo wepamhepo) - marongero ehurongwa-yemagetsi mutambo, uyo unofanirwa kudomwa: iyo chaiyo kero ichatarisirwa mitambo inobatsira pamwe nesangano ravo, rondedzero uye kuverenga yemitambo, nzvimbo (s) uye nguva yakatarwa yekubhadhara, ruzivo rwekurambidzwa kwekutamba kune vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere ekuberekwa.
Kuronga uye kuitisa mitambo yemukana paInternet (online) kune anoronga mutambo, iwe unofanirwa kuve nemvumo ye "pasi" yemutambo (isingaite). Mushure mekugamuchira mvumo yemutambo kunze kwenyika, muridzi wemvumo iyi ane mvumo yekunyorera kuInternal Revenue Service yeGeorgia mvumo yekuita mitambo yepamhepo nekupihwa kwenyaya iripamusoro zvinyorwa.
Mvumo yekuita mabasa ehurongwa uye mufambiro wokubhejera muGeorgia unoshanda kwemakore 5.
Kubhadhara kuburitswa kwemvumo yemusangano wekubhejera kuGeorgia kunoitwa gore rega. Kutanga, uyo anopiwa mari anobhadhara gore rekutanga rekushanda, uyezve gore rega rega anovandudza mvumo nekuita imwe kubhadhara.
Mari yekubhadhara inobva pane nzvimbo yebasa iri mubasa rokubhejera.
Mari yekubhadhara kubhejera muGeorgia
Mari yakaderera kwazvo yemvumo yekuitisa zviitiko zvekubheja akatakura zvinhu zvinoronga mhando iyi yebhizinesi munzvimbo dzekutandarira. Mutemo uyu wakanangana nekusimudzira zvivakwa zvekushanya zveGeorgia
Nokudaro, makasinasi uye mamwe emitambo yekubhejera munzvimbo dzakapoteredza maguta enyika (Borjomi, Batumi, Kobuleti) vanofarira zvikomborero zvakakura mukugadza bhodhi kuti vawane mvumo yekuita bhizinesi.
Kunyanya, mwero wepagore wemubhadharo wemvumo yekuronga kasino muBatumi ndeye 250 zviuru GEL / $ 103.6 zviuru, nepo muTbilisi - .. GEL 5 mamirioni / $ 2 072 250. Mune ino kesi, kana iye anogamuchira ane mvumo kuronga makasino muBatumi achiisa chinzvimbo munzvimbo yehotera ichangobva kuvakwa nekuvapo kwemakamuri asingasviki zana, zvinoregererwa kubhadhara muripo wemvumo kumakore gumi. Uye zvakare, mvumo inopihwa mahara kusangano rekasino Kazbegi matunhu ematunhu, Tskhaltubo, Sighnaghi.
Mamiriro acho akafanana nehukuru hwebhodhi mvumo yekuitisa mamwe marudzi ekubhejera (marotari, kubheja zvemitambo, makirabhu ekubhejera). Semuenzaniso, mubhadharo wemvumo yekuronga mabhuki muTbilisi ndiGEL 200 zviuru / US $ 8.3 zviuru pagore, apo munharaunda yematunhu ematunhu eBatumi, Kutaisi, Rustavi -… Iwo ese makumi masere zviuru GEL / $ 80 zviuru . mugore.
Mukuwedzera kune mari yegore negore yekubvumira kubhejera, nyaya yezvinhu zvakadaro inopa mari yekutarisira, iyo yakawanda inotarirwa zvichienderana nechechi uye chiyero chechina:
nemuchina wega wega - GEL 1,5-3 zviuru.;
nechero tafura kasino - GEL 15-30 zviuru.;
netafura yega yega yekubhejera kirabhu - GEL 3-10 zviuru.
pamutambo mune system-yemagetsi fomu - GEL 30-60 zviuru.
nerejista yega yega yemari kana inobatsira pamitambo yemakasino mu-system-yemagetsi fomu, iri kunze kwechinhu chakarongedzwa, maererano nesarudzo, yemitambo yemukana kana inobatsira - GEL 1-1,5 zviuru.
nemufananidzo wega wega wekusimudzira - 10% yedziva remubairo.
Mari iyo iri mukati memuganhu wakatarwa inogadzwa nehutungamiri hwepanyika.
Pamubati wemvumo, iyo isiri kuita nemazvo zvibvumirano zvakatemerwa faindi uye chinodiwa chekutanga kudzikamisa zviitwa zvacho zvinoenderana nezvinodiwa nemvumo, mukati menguva yakatarwa nemutumbi wakapa mvumo. Faini GEL inosiyana kubva pachiuru. kusvika zviuru gumi. / $ 10-415.
Kana muridzi wemvumo, iyo yakatemwa nguva yekuisa mumutsetse inobvumidza zvinodiwa haina kuzadzikiswa ichi chinodiwa, yakapa chirango chechipiri muhuwandu hwetatu katatu. Kana mushure mekuguma kwenguva yakatarwa, pamwe nekumisikidzwa kechipiri kwezuva rakanaka, muridzi wemvumo haana kuzadzisa mamiriro emvumo, huwandu hwefaindi hwakapetwa katatu. Kana muridzi wemvumo yacho asingazoteedzere mamiriro ekupa marezinesi, danho rekuregererwa kwemvumo.
Kana nyaya dzekubhejera dzisingadi gore rinouya kuti dzirambe dzichiita mabasa anotarisira kugadziriswa, zvakakwana kwemazuva ebhizinesi 5 kusati kwekupedzisira kwebhadharo yegore negore kuzivisa Internal Revenue Service, iyo inogona kubvisa chiremera.
Iyo nzira yekutonga operator
Iyo hurumende hurumende inotarisa kugadziriswa kwemvumo yevanini vekubhejera inotarisirwa mvumo yekupa mvumo, ndiyo Internal Revenue Service yeGeorgia, Ministry of Internal Affairs uye Financial Monitoring Service yeGeorgia.
Ministry of Finance yeGeorgia
Mukati mekugona kwayo, masangano ekutonga anofanirwa kuona nekushandisa nzira dzekupindura kwekupokana nekutyorwa kwezvinoitwa zvekubheja zviitiko. Kazhinji vari kutarisa Revenue Service maererano nemubhadharo wakakodzera uye nenguva. Interior Ministry inodzora kuzadzikiswa kwezvinodiwa nemutemo maererano nekuwanika kwemidziyo mune yega yega institution yekutarisa. Zvakare kutariswa kutevedzera zvinodiwa neanoshanda maererano nezvirango zvenguva yekubhadhara (kana zvakatemerwa). Chinhu chakakosha kupa muyedzo wecasino mari yemutambo vatambi muchikwereti chemitero, iyo inorambidzwa nemutemo. Kana kutyorwa kwakadai kwakagadzwa, muridzi wemvumo yekuronga kubhejera anofanirwa kubhadhara faindi yakakura. Muchiitiko chekudzokorora kwekutyora uku kunokwanisika kudzoserwa nechena mhosva manejimendi enzvimbo yekubhejera.
Georgia - nyika ine yakajeka uye yakajeka mutero mutemo, ine yakaderera mutero mutoro.
Chiitiko chebhukumaki kuGeorgia chakabhadhariswa mutero zvekuti munhu wese ane mvumo yekuitisa bhizimusi rerudzi urwu, anobhadhara 5% yeVAT bheti. Uyu mutero wemutero hauna kukoshesa kumubati wemvumo. Nekudaro, vamiriri vebhizimusi rekubheja vanofunga kufunga kuti rakanyanya kunaka ringave mutero we15-20% yemari yakawanda yekubhejera.
Inopokana mamiriro ezvinhu nekuteresa zvimwe zviitiko mumunda wekubhejera (makasino, rotari, zvichingodaro. N.). Masangano ebhizinesi anobhadhara mutero pachiyero chegumi neshanu yemari yemubhadharo wezvainoita. Nekudaro, ivo vari mumamiriro akafanana sevamwe vezvemabhizinesi munharaunda yeGeorgia - izvo zviitwa zvisina hukama nekupihwa mumasevhisi ekubhejera indasitiri.
Chinyorwa 35 cheMutemo weGeorgia "Pakurongeka kwemalotari, kubhejera nemitambo inobatsira" inogadza zvirango zvakati wandei kumvumo yemuridzi yekutamba kubhejera. Semuenzaniso, hazvibvumirwe marotari kuronga kwekubhejera nemitambo inobatsira (kunze kwekusimudzira rotari), pamwe nekutengesa / kugovera matikiti erotari, kubhejera nemitambo inobatsira (kunze kwekutepfenyura matikiti erotari) mumasangano evana ekurapa uye ekudzidzisa, dzimba dze kunamatira, zvipatara zvevana, maraibhurari, mamuseum, zvivakwa zvemahofisi ehurumende nevemunharaunda, pamwe nenzvimbo dzinorambidzwa nevakuru vemunharaunda.
Zvinorambidzwa kubatanidzwa mukubhejera vanhu vasina kuwana makore 18, uye kutamba mukaseti ndeye 21 anniversary.
Iyo yekuwedzera nzira yekudyidzana mutoro wevashandisi vekubhejera ndeyekudzora huwandu hwemari iyo vatori vechikamu vanoshandisa kubhejera, kubva kuFineral Monitoring Service yeGeorgia. Mumwe murongi wemutambo wemukana anosungirwa kuzivisa vamiriri vevanhu vesevhisi, avo vanoshandisa pakubhejera zvinopfuura GEL 3 zviuru. / $ 1243 pazuva. Sevhisi yekusapa ruzivo urwu kune anoshanda inogona kubhadhariswa muhuwandu hweGEL kubva ku2-6 zviuru. / $ 830-2490. Yakakodzera kutariswa kusikwa kweiyo Financial Monitoring Service yeavo anonzi runyorwa runyorwa - runyorwa rwevanhu vanorambidzwa kutora chikamu mune chero kubhejera munharaunda yeGeorgia. Iri runyorwa runonyanya kuve nevamiriri vemapoka akasiyana emagandanga epasi rose uye mapoka ematsotsi.
Kwemakore akati wandei muGeorgia kune hurukuro pamusoro pekudikanwa kwekurambidza kubhejera kushambadza paterevhizheni, redhiyo uye zvimwe media Asi ikozvino kufunga nezve zvakashata kukanganisa kwekushambadzira kwakadai hakuwane rutsigiro rwehuwandu hwevanhu.
0.1 Rwinyorwa rweZvinyorwa zvepamusoro 10 Georgian Online Casino Sites
2.1 Kubhejera muGeorgia
3 Georgia Online - Kubhejera kuGeorgia
3.0.1 Kubhejera pamhepo muGeorgia - nhoroondo yezvakaitika
3.0.2 Ndezvipi zvinotungamirirwa nebhizimusi mubhizimusi?
3.0.3 Ichokwadi kuti mitemo iyi inorevei kune mutambi?
3.1 Ungatanga sei kutamba casino online muGeorgia?
3.1.1 Enda kuGeorgia uye pfupi muchiitiko chenhoroondo
3.1.2 Georgia pamepu yeAsia
3.1.3 Tbilisi dzakanaka
3.1.4 Chokwadi chinofadza pamusoro peGeorgia neGeorgia
3.2 Casino muGeorgia: Mitero
3.4 Mamiriro ezvinhu ekuwana mvumo
3.5 Mvumo yemvumo
3.5.1 Mari yekubhadhara kubhejera muGeorgia
3.7 Iyo nzira yekutonga operator
3.8 Mutero wekubhejera
3.9 Kunyanya kubhejera
mandarin pamuzinda wekhasino hapana dhipo bhonasi 2020